Hector Bellerin waa uu joogi karaa Arsenal, Barcelona uma baahna isaga! – Marca – Gool FM
(London) 27 Maarso 2017 – “Hector Bellerin waa uu joogi karaa kooxda Arsenal, Barcelona uma baahna isaga”- waxa uu ahaa cinwaanka warbixin farxad gelinaysa taageerayaasha Arsenal oo lagu daabacay jariiradda Marca ee ka soo baxda Spain.
Waxaa la warinayaa in Barcelona oo waqti dheer raacdo ugu jirtay saxiixa daafaca midig ee kooxda Arsenal Hector Bellerin ay go’aansatay haatan inay meel iska dhigto xiisahaas.
Xiddigan reer Spain ayaa ka soo aflaxay xerada tababarka kooxda Barcelona ee La Masia ka hor inta uusan u dhaqaaqin kooxda Gunners ee ka dhisan waqooyiga magaalada London.
Sida wararku ay sheegayaan kooxda Arsenal waxa ay doonaysa inay ku dheggaanato, isla markaana ay ku dadaasho sidii ay u haysan lahayd 22-sano jirkaan, waxaana ay doonayaan inay ka saxiixdaan heshiis lix sanadood ah kaastoo ka dhigi doona in markaa lagu helo isaga 45 milyan oo bound.
Jariiradda Marca oo warbixintan qortay ayaa sheegaysa in kooxa Barcelona ay isaga baxday soo xero gelinta Hector Bellerin, iyagoo markaan diiradda u leexiyey dambeedka kooxda Valencia ee Joao Cancelo.
Cancelo, kaasoo sidoo kale 22-sano jir ah ayaa 82 kulan u saftay kooxda Valencia tan iyo markii ay la soo saxiixdeen sanadkii 2014-kii.